thinzar's blog: Sound Editing Software
သီချင်းတွေကို ဖြတ်ညှပ်ကပ် လုပ်ချင်ရင်ဖြစ်ဖြစ်၊ Record လုပ်ထားတဲ့ sound file တွေကို edit လုပ်ချင်ရင် ဖြစ်ဖြစ် Audacity ဆိုတဲ့ software လေးကို သုံးကြည့်ပါ။ OpenSource ဆိုတော့ free download လုပ်လို့ ရပါတယ်။
(ကျမကတော့ ဒီ software သုံးပြီး ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းတွေကို ဖြတ်ပြီး ringtone လုပ်ဖို့ သုံးတာ များပါတယ်။ ပိုက်ပိုက် မကုန်တဲ့ နည်းပေါ့။)
Audacity Windows Website မှာ download လုပ်ပါ။ ထုံးစံအတိုင်း next -> next -> next များကို နှိပ်ပြီး install လုပ်ရပါမယ်။
mp3 များကို ဖြတ်ညှပ်ကပ်လုပ်ရန်
၁။ File -> Open မှတဆင့် mp3 တစ်ပုဒ်ကို ရွေးပါ။
၂။ အောက်ပါအတိုင်း သံစဉ်လှိုင်းများ ပေါ်လာလျှင် မိမိ အလိုရှိသော သံစဉ် အပိုင်းကို select လုပ်ပါ။ (မိမိ အလိုရှိသော အပိုင်းကို အတိအကျသိရန် play လုပ်ပြီး အချိန် အပိုင်း အခြားကို သေချာ မှတ်သားထားပါ။)
၃။ လိုချင်သော အပိုင်းအခြားကို select လုပ်ပြီးလျှင် Edit -> Trim လုပ်ပါ။
၄။ File -> Export as mp3 မှာ အမည်တစ်ခု ပေးပြီး save လုပ်မည်ဟု နှိပ်လိုက်လျှင် အောက်ပါ မေးခွန်းကို မေးလိမ့်မည်။ dll ကို allocate လုပ်ခိုင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ (software ကို ပထမဆုံး အကြိမ် သုံးသည့် အချိန်တွင်သာ မေးလိမ့်မည်။ )
၅။ ဒီအတွက် ဒီနေရာ ကို ပြန်သွားပြီး LAME mp3 encoder ဆိုတာကို download လုပ်ပြီး Audacity install လုပ်ထားသော folder ထဲမှာ ထည့်ထားပါ။
အထက်ပါအတိုင်း lame_enc.dll ကို open လုပ်လိုက်ပါ။ သီချင်း ဖြတ်ခြင်း ဤတွင် ပြီးဧ။်။
9/9/07 11:56 PM
မလေးမ>> ဟုတ်ကဲ့။ အဲဂလိုပါဘဲ။ ကိုယ့်အသံကိုသွင်းပြီး reverse လုပ်ကြည့်ချင်လဲ ရတယ်။ အပိုင်းပိုင်းဖြတ် ပြန်ဆက်ပြီးသာ နားထောင်ကြည့်။ :)သိသလောက်တော့ ရွှီးထား .. အဲ ရေးထားတာပါ။
11/9/07 5:51 PM
thinzar ရေ.. ဒီပို့စ်အတွက်ကျေးဇူး အထူး.. အိမ်မှာ စမ်းကြည့်အုံးမယ်.. မရရင်တော့ ကူဖြတ်ပေးနော်.. (သီချင်းကိုပြောတာ)
17/9/07 4:23 PM
ဒီမိုရေ.. လာဖတ်သွားတာ ကျေးဇူးဘဲ။ ဒါနဲ့မှ ဖြတ်လို့ မရရင်တော့ လွှနဲ့ ဖြတ်မှဘဲ ရတော့မယ်ထင်တယ်။ :P
17/9/07 5:32 PM
ဟိဟိ.. လွှ မလိုတော့ဘူး.. ခု လုပ်လို့ ရသွားပြီ.. ခု အလုပ်ထဲမှာ သီချင်းထိုင်ဖြတ်နေတာ.. =D
ဒီမို ring tones ကိုခဏခဏ ပြောင်းနေကြ.. တစ်ခါပြောင်းချင်တိုင်း သူငယ်ချင်းကို အပူကပ်ရတာ.. ခုတော့ အိုကေသွားပြီ.. Many Thanks for this post again..
17/9/07 6:34 PM
မသဉ္စရေ မင်္ဂလာပါ။ ဒါမျိုးလေးရှာနေတာကြာပြီဗျ အခုမှရပဲတွေတော့တယ်။ ကျေးဇူအများ...ကြီးတင်ပါတယ်။
30/10/07 4:24 PM
Brang Nu said...
Really Thanks For This Post.. Ma Tin Zar. I am looking around like this software for long time.. :). Bye the way, your blog is really different from others.. we can get so many knowledges from you via your blog.. This doesn't mean that others' blog are not good.. all myanmar blog are really useful.. We are happy about that and proud.. Thanks Again.
1/3/08 9:46 PM
Kye Zue A Yan Tin Bar Tal. Ma Tin Zar. A Khu Ka Nay Sa Pyi Tawt.. Twie Twie Da Mya Phyat Bar Tawt Mal. :P
1/3/08 9:48 PM
demo >> လာတော့ မဖက်ပါနဲ့။ ကြောက်တတ်လို့။ :P နောက်တာနော်။
အောင်သူ>> ရပါတယ်။ အသုံးဝင်တယ်ဆိုရင် ဝမ်းသာပါတယ်။
Brang Nu>> Thanks for dropping comment. I'm just trying to share the little small things that i know. I'm glad if someone benefit something from my blog. Yeah, i agree, myanmar blogs are useful. I'm also learningalot through myanmar blogs.
တွေ့သမျှတော့ အကုန်မဖတ်ပါနဲ့ဦး။ တစ်ခါတစ်လေ စိတ်ပေါက်ရင် ပေါက်သလို တောင်ရေးမြောက်ရေး ရေးထားတာ။ :)